Al-Shabaab oo ciidan Itoobiyaan ah ka hor istaagay in ay u gudbaan degmada Waajid. – idalenews.com
Al-Shabaab oo ciidan Itoobiyaan ah ka hor istaagay in ay u gudbaan degmada Waajid.
Wararka laga helaayo Gobalka Bakool ayaa waxa ay sheegayaan in wali ciidamada Itoobiya iyo kuwa Al-Shabaab ay isku hor fadhiyaan deegaano ka tirsan gobalka Bakool.
Dagaal shalay illaa xalay ka dhacaayay deegaano ku dhaw dhaw degmada Waajid ayaa laba ciidan waxa ay ku dagaa;amayeen in mudo ah iyadoo labada dhinac ay soo kala gaareen khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegteen in guulo ay ka gaareen dagaalkaas isla markaana waxa ay cadeeyeen in ay weerareen ciidamo Itoobiyaan ah kuwaas oo kasoo baxay dalka Itoobiya isla markaana ku wajahnaa dhanka iyo degmada Waajid.
Ciidamadii Itoobiya ayaa la sheegay in ay awoodi waayaan in ay u gudbaan degmada Waajid isla markaana ay fariisimo ka sameysteen meel aan ka fogeyn degmada isla markaana waxaa hareeraha ka jooga ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo markasta soo weeraraya.
Degmada Waajid ayaa la sheegay in ay kasoo ciidamo Itoobiyaan ah kuwaas oo la sheegay in ay doonayan sidii ay u soo galbin lahaayeen ciidamaadan ku go’doosan meel aan ka fogeyn Waajid.
Wararka ayaa waxa ay intaas ku darayaan in qaar ka mid ah baabuurta Ciidanka Itoobiya in halkaas lagu gubay inta uu dagaalka socda sidaas ayayna ciidamada ku joojiyeen in ay horay u sii socdaan,
Idale News Online. Waajid.
Ku dhawaad 20-qofood oo cudur aan la aqoon ugu geeriyooday Gobalka Bay.
Gudoomiyaha Cusub Ee Degmadda Afgooye Mudane Xaaji Gaabow oo xilka la wareegay.